एनआईसी एशियाले १०.५२ प्रतिशत बोनश शेयर दिने | गृहपृष्ठ
Home लगानी एनआईसी एशियाले १०.५२ प्रतिशत बोनश शेयर दिने
on: ३० कार्तिक २०७५, शुक्रबार १७:१८ लगानी
कात्तिक ३०, काठमाडौं (अस) । एनआईसी एशिया बैङ्क लिमिटेडले १० दशमलव ५२६ प्रतिशत बोनश शेयर दिने भएको छ । शुक्रवार बसेको बैङ्कको ३ सय ७७ औं सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को लागि सो बराबरको बोनस शेयर दिने घोषणा गरेको हो ।
समितिले उक्त शेयर लाभांशमा लाग्ने कर प्रयोजनको लागि प्रतिशेयर शून्य दशमलव ५२६ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय समेत गरेको छ । उक्त लाभांश नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्वीकृति तथा बैङ्कको आगामी वार्षिक साधारणसभाबाट पारित भएपछि मात्र शेयरधनीलाई वितरण गरिने बैङ्कले बताएको छ ।
बैङ्कले गत आर्थिक वर्षमा वार्षिक विन्दुगत आधारमा कर्जा तथा सापटी तर्फ रू. ४८ अर्ब वृद्धि गरी रू. १ खर्ब २० अर्ब प्रवाह गरेको थियो । सो अवधिमा बैङ्कले रू. ६४ अर्ब वृद्धि गरी रु. १ खर्ब ५२ अर्ब निक्षेप सङ्कलन गरेको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमाससम्ममा भने बैङ्कले कर्जा तथा सापटीतर्फ वार्षिक विन्दुगत आधारमा ६१ प्रतिशतले वृद्धि गरी रु. १ खर्ब ३९ अर्ब पुर्‍याएको छ । यस्तै कुल निक्षेपमा ५८ प्रतिशतले वृद्धि गरी रु. १ खर्ब ६३ अर्ब सङ्कलन गर्न सफल भएको छ । साथै, खुद मूनाफामा १ सय ७० प्रतिशतले वृद्धि गरी रु. ७५ करोड ५३ लाख आर्जन गरेको छ । बैङ्कको प्रतिशेयर आम्दानी रू. ३६ दशमलव ७८ रहेको छ ।
हाल बैङ्कले नेपाल भर २ सय ६५ ओटा शाखा सञ्जाल, २ सय ६९ एटिम, ३७ एक्सटेन्सन काउण्टर तथा १८ शाखारहित बैङ्किङ सेवा मार्फत आफ्नो सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
वार्षिक ११% ब्याजदरमा एनआईसी एशियाले ऋणपत्र जारी गर्ने
७ कार्तिक २०७५, बुधबार १३:२९
५ आश्विन २०७५, शुक्रबार १६:५२
२१ भाद्र २०७५, बिहीबार १५:४०
१२ भाद्र २०७५, मंगलवार १२:५७